> Resource> Naghachi> Olee naghachi ehichapụ faịlụ site na mkpịsị aka Drive
Olee otú Naghachi a mkpịsị aka Drive?
Na m nwere ọtụtụ dị oké ọnụ ahịa dị na m Sandisk isi mkpịsị aka mbanye. M ehichapụ ụfọdụ n'ime ha dị nnọọ ugbu a. M na-adịghị ihe ọ bụla ndabere na kọmputa m. Achọrọ m na-azụ m foto emecha. Nwere ike onye na-agwa m otú? Ekele.
N'ezie, na-ehichapụ faịlụ ndị dị nnọọ keerughi on gị isi mkpịsị aka mbanye. Na ọnọdụ na ị na-enwebeghị ọhụrụ ọ bụla data gị mkpịsị aka mbanye, gị nwere ike omume gbapụta ha na enyemaka nke a mkpịsị aka mbanye faịlụ mgbake usoro.
Wondershare Data Recovery, Ma ọ bụ Wondershare Data Recovery for Mac dị otú ahụ a na omume nke na-enyere gị iji naghachi data si mkpịsị aka mbanye na ole na ole dị mfe òké clicks. Nke a ịrịba isi mkpịsị aka mbanye faịlụ mgbake omume bụ ike naghachi fọrọ nke nta niile faịlụ na ụdị si gị isi mkpịsị aka mbanye, gụnyere photos, videos, ọdịyo faịlụ, wdg
Ị nwere ike nweta a ikpe mbipute nke Wondershare Data Recovery n'okpuru. Biko download nri omume version maka kọmputa gị usoro.
Naghachi ehichapụ faịlụ site na mkpịsị aka mbanye ke 3 Nzọụkwụ
Ugbu a, ka ịrụ isi mkpịsị aka mbanye faịlụ mgbake na Windows kọmputa. Ọrụ nke Mac version yiri kwa.
Tupu anyị amalite, biko hụ na gị na mkpịsị aka mbanye nwere ike jikọọ na kọmputa gị na ghọtara dị ka mpụga nchekwa na ngwaọrụ.
Nzọụkwụ 1 Họrọ mgbake mode na-amalite
Ẹkedori Wondershare Data Recovery, na mgbe ahụ ị ga-esi a window nke na-egosi 3 mgbake ụdịdị na a "Wubàtá Iweghachite" nhọrọ.
Naghachi ehichapụ faịlụ site na isi mkpịsị aka mbanye, ka na-agbalị "Echefuola File Iweghachite" mode ọnụ.
Nzọụkwụ 2 Iṅomi gị isi mkpịsị aka mbanye
Na nke a nzọụkwụ, mkpa ka ị họrọ mbanye akwụkwọ ozi nke gị isi mkpịsị aka mbanye na pịa "Malite" button na-amalite na-achọ furu efu faịlụ.
Ọ bụrụ na faịlụ na gị isi mkpịsị aka mbanye furu n'ihi formatting, biko họrọ "Kwado Deep iṅomi" nhọrọ ke window.
Nzọụkwụ 3 Naghachi faịlụ site na isi mkpịsị aka mbanye
The hụrụ ọdịnaya na gị isi mkpịsị aka mbanye ga-egosipụta na ụdị faịlụ ma ọ bụ ụzọ mgbe iṅomi. Biko ele faịlụ aha ego otú ọtụtụ faịlụ na ị ga-enwe ike iji naputa site gị isi mkpịsị aka mbanye. Ị na-enwe ike ihuchalu hụrụ foto na gị isi mkpịsị aka mbanye tupu mgbake kwa.
Mgbe ahụ, ị ​​dị nnọọ mkpa iji họrọ faịlụ na ị chọrọ iji weghachite na pịa "Naghachi" na-azọpụta ha na kọmputa gị.
Cheta na: Iji zere data overwritten, biko adịghị ịzọpụta natara ihe azụ gị mkpịsị aka ụgbọala ozugbo mgbe mgbake
Toshiba Data Recovery: Olee naghachi Data si Toshiba laptọọpụ
Desktọpụ Data Recovery: Olee naghachi Data si Desktọpụ Computer
Raw Photo Recovery: Olee naghachi Raw Photos si Digital Igwefoto
Olee otú nkebi a ike mbanye na Windows 10?
3 Nzọụkwụ ịrụ DataTraveler Iweghachite
Txt Iweghachite: Olee naghachi TXT Files na Mac / Windows
Ngwọta nke OCZ Votex SSD Iweghachite
Olee otú Naghachi partitions on Vista
Nkuzi nke Mac Mkpofu ehichapụ Foto dị Iweghachite
Olee otú iji weghachi Data si ehichapụ nkebi